ချဲလ်ဆီးနှင့် သူ၏ ချစ်သူများ: March 2008
ဒီတပတ်မှာတော့ ချဲလ်ဆီး-မဒ်ဒယ်ဘရော့ (၀ါ) ဘိုရိုပွဲပါ။ မနေ့က မန်ယူက အိမ်ကွင်းမှာ အက်စတွန်ဗီလာကို အနိင်ရလိုက်သည့်အပြင် ၊ အာစင်နယ်ကလည်း အဝေးကွင်းမှာ ကပ်ကာ အနိင်ရသွားတာကြောင့် တတိယနေရာကို ပြန်ဆင်းနေခဲ့ပါပြီ။ ဒါကြောင့် ဒုတိယနေရာကို အပိုင် ပြန်တက်လှမ်းနိင်ဖို့ရန် ဒီကနေ့ပွဲကို အထူးကြိုးစား ကစားနိင်မှ တော်ရာကျပါ့မည်။ နောက်တပတ် ပွဲစဉ်မှာ အာစင်နယ်-လီဗာပူးလ် ကန်ရမှာ ဖြစ်သောကြောင့် ဒီကနေ့ ပွဲကို အနိင်ကန်ထားနိင်လျှင် ချဲလ်ဆီးတို့ အခြေအနေ တော်တော်ကောင်းသွား နိင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဒဏ်ရာရနေသော ကျွန်တော်တို့ ဂိုးသမားလေး ပီတာဆက်ခ်ျ ပြန်ပါဝင်လာသောကြောင့် ကဲ...ချဲလ်ဆီးတို့ရေ ဖြစ်လာနိင်ဖွယ်၇ှိတဲ့ လူစာရင်းကတော့
ရှေ့တန်း - ဒရော့ဘာ
အလယ်တန်း - ဘောလက် ၊ အက်ဆီယန် ၊ ဂျိုလ်ကိုး ၊ အကာလူး
နောက်တန်း - ကာဗယ်ဟို ၊ အဲလက်စ် ၊ ဘလက်တီ ၊ အက်ရ်ှလေကိုး
ဂိုး - ပီတာဆက်ခ်ျ
တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒဏ်ရာရ လူစာရင်းမှာ တယ်ရီ ၊ လမ်းပတ် တို့ဖြစ်ပါတယ်။ ကွင်းလယ်မှာ လမ်းပတ် မပါတော့ အားနည်းသလို ၊ နောက်တန်းမှာ တယ်ရီမပါတာကလည်း တအားလျှော့စရာပါ။ ဒါပေမယ့် အိမ်ကွင်း ကောင်းတဲ့ ချဲလ်ဆီးဟာ ဒီပွဲကို ဘယ်လိုကန်ပြသွားမယ်ဆိုတာ စောင့်ကြည့်ရတာပေ့ါ။
ဂိုးသွင်းမည့်သူ - ဒရော့ဘာ ၊ ဘောလက် ၊ ဂျိုလ်ကိုး
ခန့်မှန်းချက် - ၂းဝ
နောက်တစ်ပတ်ကတော့ ချန်ပီယံလိဂ်ပွဲစဉ်ဖြစ်ပြီး တူရကီအသင်း ဖီနာဘာချီနဲ့ အဝေးကွင်း ဖြစ်ပါကြောင်း တင်ပြရင်း အောင်မြင်ပါစေ....အပြာရောင်တပ်သားတို့ရေ
Posted by ဆိုးသွမ်း at 4:33 PM2comments: Links to this post
ကဲ...ချဲလ်ဆီး ကိုချစ်သော ဘလော့ဂ်ဂါ အစ်ကိုအစ်မ ညီညီမ တို့ရေ ၊ လက်ရှိ အသင်းမှာ အလိုအပ်ဆုံးကတော့ ရှေ့တန်း ထင်တယ်ဗျာ။ ဒါက ကျွန်တော့် အထင်ပေ့ါနော်။ ဘာလို့လည်း ဆိုတော့ လက်ရှိမှာ ဒရော့ဘာ မပါရင် အသင်းက ဂိုးမရဘူး ဖြစ်နေတယ်ဗျ။ ပြီးတော့ ဟိုနေ့က အာစင်နယ်နဲ့ ပွဲကို ကြည့်မယ် ဆိုရင်လည်း ဒရော့ဘာ သာ မရှိရင် အဲဒီနေ့က ၁ ဂိုးနဲ့ ရှုံးပြီး ပွဲက ပြီးသွားမှာပါ။ အာဖရိကမှာ ဆင်ရိုင်းတွေနဲ့ သွားကန်လာတော့ ကျွန်တော်တို့ အာဖရိက ချဲလ်ဆီးကစားသမားတွေဖြစ်တဲ့ အက်ဆီယန် ၊ မီခေးလ် ၊ အကာလူး ၊ ဒရော့ဘာ တို့ပွဲပန်းနေကြတာ ကြောင့်လည်း ဖြစ်နိင်ပါတယ်။ သူတို့ မရှိတုန်းကတော့ နိင်အောင် ကန်ခဲ့သေးတာ ကလည်း ရှိသေးတယ် မဟုတ်လား။
အခုတော့ ဒရော့ဘာ က ဂိုးတွေ ပြန်သွင်းလာနိင်လို့ အခြေအနေ ကောင်းနေပေမယ့် သူဝင်မကန်တဲ့ ပွဲဆို ကိုဂျိုကိုးလ် ကိုပဲ အားထားနေရပါတယ်။ တောင်ကစ် မြောက်ကစ်နဲ့ ဟုတ်နေတဲ့ အပြင် ၊ ကိုလမ်းပတ် ကလည်း စိတ်ချရနေရပါတယ်။ ဒါကြောင့် အခုနွေရာသီမှာ ဒရော့ဘာသာ အသင်းပြောင်းသွားခဲ့ရင် ၊ ဘယ်လိုလုပ်ကြမလည်း ပေ့ါနော် ၊ ငကန်းသေရင်တော့ ငစွေပေါ်မှာ မှန်ပေမယ့် အခြေအနေ လှပါ့မလား ၊ သေချာတာတော့ ထိပ်ဆုံး ၄ သင်းထဲ ၀င်နေမှာတော့ သေချာတယ်ပေ့ါဗျာ။ ဒါအပြင် အခုတိုက်စစ်မှုးတွေက အသက်ကြီးတာက တစ်ကြောင်း ၊ လေးနေတာက တစ်ကြောင်းနဲ့ အလုပ်မဖြစ်ဘူး ဖြစ်နေပါတယ်။ ဟန်တေလာ ကိုခေါ်မယ်ဆိုလည်း မြန်မြန်ခေါ်စေ ချင်တယ်ဗျာ။ ပြီးတော့ မန်ယူလို အငယ်လေးတွေ ရှာသင့်တယ်။ အခု ကျွန်တော်တို့ လူတွေ တဖြည်းဖြည်း ကြီးလာပြီနော်။ လမ်းပတ် ၊ မက်ခေလီလီ ၊ ဘောလက် တို့နေရာတွေ မှာ အစားထိုးဖို့ လူလိုနေပြီ။
ချဲလ်ဆီး အောင်မြင်ပါစေ...ထာဝရ ဘက်တော်သား
Posted by ဆိုးသွမ်း at 4:46 AM 1 comment: Links to this post
ဒါကတော့ ဒီတပတ် အတွက် အကောင်းဆုံး ကစားသမား ( ၁၁ ) ယောက် ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ ချဲလ်ဆီးက ကိုကို ဒရော့ဘာပါတယ်ဗျ။
1. Roy Carroll (Derby County)
2. Gretar Steinsson (Bolton Wanderers)
3. Wilfried Bouma (Aston Villa)
4. Andre Bikey (Reading)
5. Jonny Evans (Sunderland)
7. David Bentley (Blackburn Rovers)
8. George Boateng (Middlesbrough)
9. Roque Santa Cruz (Blackburn Rovers)
11. Didier Drogba (Chelsea)
Posted by ဆိုးသွမ်း at 7:34 PM No comments: Links to this post
Labels: ဒီတပတ် အကောင်းဆုံး ၁၁ ယောက်
ကိုကို ရော်နယ်လ်ဒင်ဟိုက ချဲလ်ဆီးက ခေါ်မယ်ဆိုရင်တောင် သူက မလာပါဘူးတဲ့။ အဟင့်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့်တို့ သူဌေးကြီး မိုဘီခ်ျ ကတော့ ဒီဘရာဇီးသားကို အသင်းကို ခေါ်ချင်နေပါတယ်။ ကဲ...ကျွန်တော်တို့ ချဲလ်ဆီးဖန်များကရော ဒင်ဟိုကို လာစေချင်ပါသလား။ အခု လောလောဆယ်မှာ ကိုဒင်ဟိုက ခြေစွမ်းမပြနိင်ဘူးဖြစ်နေပါတယ်။ ပြီးတော့ သူက ချဲလ်ဆီးကို မလာချင်တာက ကျွန်တော်တို့ အပြာရောင် တပ်သားတွေက ဘောလုံးထက် လူကို ဦးစားပေး ကစားလို့ပါတယ်။ စော်စော်ကားကား ပါခင်ဗျာ။ ဟီးဟီး ။ ဘောလုံးကန် နေကြတာ မဟုတ်လား။ အနုပညာ ကျောင်းမှ မဟုတ်တာဘဲကို။ အနည်းအကျဉ်းတော့ ရှိမှာပေါ့။
လောလောဆယ် ကျွန်တော် သိခဲ့ရသလောက်တော့ ချဲလ်ဆီးက ရိုက်လိုက်လို့ ကျိုးသွားတဲ့ ဘောလုံးသမားတွေ တစ်ယောက်မှ မရှိဘူးထင်တယ် ခင်ဗျာ။ သူများတွေက ကစ်လိုက်လို့သာ ပီတာဆက်ခ်ျ ၊ တယ်ရီ တို့ ဆေးရုံရောက်ကုန်တာ အကုန်သိ။ သနားပါတယ် ။ ဟုတ်တယ်နော် ချဲလ်ဆီးဖန်တွေ။ ဒင်ဟိုက စကေးကောင်းတာ မှန်ပေမယ့် မလိုအပ်ပါဘူးဗျာ။ မခေါ်ဘူးဗျာ။ ရှင်းရှင်းပဲ။ တော်ပြီပေ့ါ ။ ကျွန်တော် ဘာစီလိုနာ အသင်းကို ပေးဆပ်ချင်ပါတယ်ဆို လုံလောက်ပြီ။ အခုတော့ သူက ပုတ်ခပ်လိုက်သေးတယ်။ များနေပြီ။
ကျွန်တော်က ဒင်ဟိုကို ကြိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ချဲလ်ဆီးကိုတော့ မထိနဲ့ပေါ့ဗျာ။ ဟဲဟဲ ။ မလာချင်နေပါ...မစော်ကားပါနဲ့ ကိုဒင်ဟို ။ ဒါပဲ ပြောမယ်ဗျာ။ ငှဲ ငှဲ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် အခုထိ ၀မ်းနည်းနေတာကတေ့ာ အာစင်နယ်မှ ဂါးလက်စ်ကို မြင်လိုက်တိုင်း ဒီကောင့်ကို ကျွန်တော့်တို့ အသင်းပြန်ခေါ်ချင်တယ်။ ဒါပေမယ့် သူကလည်း ဘယ်လာတော့မလည်း ။ စိတ်နာသွားမှာပေ့ါ။ ပရောဖက်ရှင်နယ် ပီသအောင် နေရမှာပေ့ါဗျာ။ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိင်ငံသားတွေကလည်း အစွဲအလန်း ကြီးပ။ ဖြစ်နိင်ရင် ဘယ်သူမှ မရောင်းဘူး။ ၀ယ်ပဲဝယ်မယ် ။ ဂါးလက်စ်ရေ ...ချဲလ်ဆီးမှာ မင်းကန်တုန်းက အားကြိုးမာန်တက် ကစားခဲ့တာတွေ သတိရသေးတယ်ဗျာ။ လက်ရှိ ဘင်တယ်ဟိန်း ၊ အဲလ်က်စ်တို့ထက် စာရင် ဂါးလက်စ်က ပိုအသုံးကြတယ်ဗျာ။ ၂ နေရာ ကစားနိင်လို့။
နောက်တစ်ပွဲကတော့ မစ်ဒယ်ဘရော့်ခ် ( ၀ါ ) ဘိုရိုပေ့ါ။ လာထား...အားပေးလိုက်ကြပါစို့ ချဲလ်ဆီးဖန်တွေရေ။
Posted by ဆိုးသွမ်း at 7:12 PM3comments: Links to this post
ဒါကတော့ ချဲလ်ဆီး အသင်းရဲ့ တော့တန်း ( ၁၀ ) ဂိုးဖြစ်ပါတယ် ခင်ဗျာ။ အားပေးကြပါဦးဗျို့။
Posted by ဆိုးသွမ်း at 5:34 AM No comments: Links to this post
ဒီနေ့ပွဲမှာတော့ ချဲလ်ဆီးက လူစုံတက်စုံပါဝင် ကစားသွားကြတယ်ဗျ။
အလယ်တန်း - ဂျိုလ်ကိုး ၊ လမ်းပတ် ၊ ဘောလက် ၊ မက်ခေလီလီ
နောက်တန်း - တယ်ရီ ၊ ကာဗလ်ဟို ၊ အက်ရ်ှလေကိုး ၊ အက်ဆီယန်
တို့ဝင်ကစားသွားကြပါတယ်။ ဒီပွဲမှာ ကျွန်တော်တို့ ညာဝန်းနောက်တန်းတွေ တစ်ယောက်မှ မပါဘူးဗျ။ ဘယ်လို တွေ ဖြစ်နေကြမှန်းကို မသိလိုက်ဘူး။ ဒါပေမယ့် ဘလက်တီ တစ်ယောက်တော့ ပွဲပြီးခါနီးမှာ ပါဝင် ကစားသွားပါတယ် ခင်ဗျာ။ နောက်တန်းမှာ ဖာရဲရားထက်စာရင် ဘလက်တီက ပိုကောင်းနေတာကြောင့် အားတက်စရာပေ့ါ။ အစကတော့ ပထမပိုင်း သရေဗျ။ ဒီနေ့ပွဲမှာ ချဲလ်ဆီးထက် စာရင် အာစင်နယ်က ပိုဖိတယ်ဗျ။ အာစင်နယ်က ပြောရမယ်ဆိုရင် သူတို့က ဖလားနဲ့ ပိုနီးစပ်တာကိုး။ ဒါကြောင့် အဝေးကွင်းဆိုပေမဲ့ လည်း အသည်းအသန်ကို ကန်တာပါပဲ။ ရေကုန် ရေခမ်း ကန်ကြရင်း ပထမပိုင်း သရေနဲ့ပြီးသွားခဲ့ပါတယ်။
ဒုတိယပိုင်း ပြန်စတော့ ( ၅၈ ) မိနစ်မှာ ချဲလ်ဆီးက ထောင့်ကန်ဘောပေးရပါတယ်။ အဲဒီထောင့်ကန်ဘောကို အာစင်နယ်မှ ဖာဘရီဂတ်စ်က ကန်တင်ပေးတာကို အာစင်နယ် နောက်တန်း Sagna က ဂိုးသမား ကူဒီစီနီရဲ့ ညာဘက်ထောင့်ထဲကို တိုက်သွင်းသွားခဲ့တာပါ။ ဒါပေမယ့် ဂိုးသမား ညံဖျင်းမှုကြောင့် ဂိုးဝင်သွားတယ်လို့တော့ ပြောလို့ရသလို အာစင်နယ် နောက်တန်းလူ ခေါင်းတိုက်ကောင်းတာလည်း ပါပါတယ်။
အစကတော့ ကျွန်တော်လည်း ရှုံးပြီ ဆိုပြီး စိတ်ဓတ်ပျက်သွားသေးတာ။ ပြီးတော့ ဒရော့ဘာကလည်း ဒီနေ့မှ ကစားတာ လေးနေသလိုပဲဗျာ။ အမှန်ကတော့ ပုံမှန်ကစားတာပါပဲ။ ကိုယ်ကနိင်စေချင်တော့ မြန်မြန်ဆော့စေချင်တာ ။ နောက်ဆုံးတော့လည်း အရေးကြုံတော့ သက်လုံကောင်းဆိုသလို ကယ်တင်ရှင် မင်းသားချောကြီး ဒရော့ဘာရဲ့ (၇၁ ၊ ၈၂ ) မိနစ်ဂိုးတွေဟာ ဒီကနေ့ ပရီးမီးယားလိဂ်ရဲ့ ဒုတိယ နေရာကို ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ် ။
ပထမချေပဂိုးကတော့ တော်တော်ပြင်းတယ် ခင်ဗျ။ ပိုင်နယ်တီ ဧရိယာထဲမှာ အယ်လမူးနီးယားရဲ့ ဘယ်ဘက် ထောင့်ထဲကို အပြင်းကန်သွင်းလိုက်တာပါ။ နောက်တစ်ဂိုးကတော့ အနီးကပ်ကန်တာပါ။ ဒါကို ဂိုးသမားကလည်း ပုတ်ထုတ်လိုက်တာ အနည်းငယ် အားနည်းသွားတာကြောင့် ညာဘက်ထောင့်ထဲကို အသာလေးမြှောက်ကာ ၀င်သွားတာပေ့ါဗျာ။ ဒီတော့ကာ ကျွန်တော်တို့၏ ချစ်လှစွာသော အပြာရောင် ခြင်္သေ့တပ်သားများဟာဖြင့် လက်ရှိအဆင့် ၂ နေရာကို အောင်မြင်စွာ တက်လှမ်းလာနိင်ခဲ့ပါပြီ ဖြစ်ကြောင်း သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါသည်။
Posted by ဆိုးသွမ်း at 2:04 AM 1 comment: Links to this post
ဒါကတော့ ချဲလ်ဆီး - အာစင်နယ်ရဲ့ ဖြစ်နိင်ခြေရှိတဲ့ လူစာရင်းပါ။ ရှေ့တန်းမှာ ဒရော့ဘာတစ်ယောက်တည်းကို ကစားနေကြ ပုံစံအတိုင်း အထောင်ထားပြီးတော့ အကာလူးနဲ့ ဂျိုကိုးလ်ကို ၀န်း ဘယ်ညာရံထားပါတယ်။ အလယ်မှာက အက်ဆီယန်နဲ့လမ်းပတ်ကို ထားပြီး မီခေးလ်ကတော့ ဆူပါဆပ် အဖျက်သဘောမျိုး ကစားမဲ့ အနေအထားပါ။ နောက်တန်းမှာကတော့ ဘလက်တီ ပြန်မကောင်းသေးလို့ ဖာရဲရား ရှိနေပြီး ကျန်လူများကတော့ မချိန်းပါဘူး။ ဂိုးသမားကတော့ ကူဒီစီနီပေ့ါ။ ကဲ...အပြာရောင်တပ်သားတွေရော အားပေးလိုက်ကြပါဦးစို့။ ဒီတစ်ပွဲကိုတော့ ရေကုန်ရေခန်း ကန်မှ ရတော့မှာနော်။
Posted by ဆိုးသွမ်း at 1:11 PM2comments: Links to this post
လောလောဆယ်မှာတော့ ကျွန်တော်တို့ အသင်းရဲ့ အဓိက ကွင်းလယ် ကစားသမားဖြစ်တဲ့ Frank.Lampard ကြီးကတော့ ချဲလ်ဆီးအသင်းက စာချုပ်သစ် ထပ်မချုပ်တာနဲ့ ပတ်သတ်လို့ ပြဿနာ အနည်းငယ် ဖြစ်နေပါတယ် ။ အသင်းပြောင်းရွှေ့ကြေး ပေါင်း ( ၁၁ ) သန်းနဲ့ ၀က်စ်ဟမ်း အသင်းကနေ ပြောင်းလာတဲ့ ဒီလန်ဒန်သားဟာ ပြီးခဲ့သော ဒါဘီကောင်တီနဲ့ ပွဲအပြီးမှာတော့ အခုလိုပြောကြားခဲ့ ပါတယ်။
“ ချဲလ်ဆီး အသင်းဟာ စာချုပ်သစ်ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကမ်းလှမ်းမှုတွေ မလုပ်သေးတာကြောင့် ဖီဖာ၏ စည်းမျဉ်းများအရ လမ်းပတ်ဟာ လျှော်ကြေးငွေ ပေါင်၅သန်းပေး၍ ထွက်ခွာနိင်သလို လက်ကျန် ၉ လမှာလည်း အလွတ်ပြောင်းရွှေ့ကြေးနဲ့ ထွက်ခွာနိင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ ”
ကျွန်တော်တို့ ကိုလမ်းပတ်ကြီးက ချဲလ်ဆီး အသင်းမှာ ဆက်လက်ရှိနေစေချင်ပေမယ့် အသင်းက ဘာကြောင့် စာချုပ်မချုပ်တာလဲ ဆိုတာ တော့ စဉ်းစားစရာပါပဲ။ ဒီလန်ဒန်သားဟာ အသက် ( ၂၉ ) ရှိလာလို့ မသုံးချင်တော့လို့လား ဆိုတာတော့ တွေးမိပါတယ်။
နောက်ပြီး ကိုလမ်းပတ်နေရာကို အစားထိုးမဲ့ ဘရာဇီးသား ဒီယေဂို ( ၂၃ ) နှစ်ဆိုတာကိုလည်း ချဲလ်ဆီးက စောင့်ကြည့်နေပါတယ်တဲ့။ ကဲ ကိုလမ်းပတ်ရေ....သတိသာထားပေတော့ဗျာ။ ကျွန်တော်တို့ကတော့ မာလ်ဒီနီ လို ထာဝရ ကစားသမား ဖြစ်ချင်ပေမယ့် မိုဘီခ်ျလက်ချက်မှာ ခင်ဗျားငုတ်တုတ်မေ့သွားမှာ တော့ စိုးတယ်ဗျာ။
Posted by ဆိုးသွမ်း at 11:34 PM2comments: Links to this post
Posted by ဆိုးသွမ်း at 9:00 AM 1 comment: Links to this post